မျက်နှာ | moethaukkye
တစ်ရက် တစ်ရွာ တစ်မျက်နှာ
လောကဆိုတာ ဒီလိုပေါ့ကွယ် ။ ။
ラベル: ဆရာတင်မိုးကဗျာများ(Tin Moe's Poem) 時刻: 22:04 投稿者 moethaukkye
မြန်မာ - Voice of America
ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကြောင့် ပြည်နယ်တိုင်း ၄ ခုက မြို့တချို့မှာ Stay At Home အမိန့်ထုတ် - ကိုဗစ်ကူးစက်တဲ့ အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက် တိုးလာတဲ့အခြေအနေကြောင့် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၄ ခုက မြို့နယ်တချို့မှာ Stay at Home နေအိမ်မှာပဲ နေကြဖို့ အမိန့်ကို အစိုးရက ထ...
စာသငျတိုကျတှေ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမကူးအောငျ အထူးဂရုပွုဖို့လို - မွနျမာပွညျမှာ ဗုဒ်ဓသာသာနာအတှကျ သံဃာတှပေညာသငျတဲ့ စာသငျတိုကျကွီးတှဟော ကိုရငျတှေ ရဟနျးတျောတှေ တနရောထဲမှာ ရာနဲ့ခြီ သီတငျးသုံးနထေိုငျရတဲ့ နရောတှဖွေဈပါတယျ။ အခုဆ...
Copyright © 2009 ဒေါင်းမာန်ဟုန်. All rights reserved.